Dowladda Soomaaliya oo Ciidamo u dirtay degaankii dadka lagu laayay - Awdinle Online
Dowladda Soomaaliya oo Ciidamo u dirtay degaankii dadka lagu laayay
Ciidamo ka tirsan Millateriga Soomaaliya gaar ahaan qeybta 27aad ayaa waxaa la sheegay inay ku baxeen degaankii xalay maleeshiyaadka hubeysan dadka ku laayeen ee hoostaga degmada Warsheekh ee gobolka Shabeellaha Dhexe.
Maleeshiyaad hubeysan ayaa Gurigooda ugu tagay dad isku qoyska ah oo ku noolaa Tuulada Xaluule oo hoostagta degmada warsheekh, iyaga oo dilay Hooyo Umul kujirtay iyo laba Carruur ah oo ay dhashay, halka ay dhaawaceen haweeney qoyska kamid aheyd & Wiil 5-sano jir ah.
Saraakiil ka tirsan Ciidamada Milalteriga ayaa waxaa ay sheegeen in u jeedkoodu uu yahay inay gacanta kusoo dhigaan dadkii ka dambeeyay dillka & dhaawaca loo geystay dadka Shacabka si uusan u abuurin xiisad kale.
Xoghayaha degmada Warsheekh Cabdullaahi Raage Colow oo Risaala la hadlay ayaa sheegay in ka maamul ahaan ay dhankooda ay ku raad joogaan dadkii ka dambeeyay dilkaas, sidoo kale ay baaritaano wadaan.
Previous articleAl-Shabaab oo weeraray Saldhigyo ay ku sugan yihiin Ciidamada Kenya
Next articleDowlada Kenya oo Damacsan in dhaqaale ka sameyso Soomaalida u dalxiis tagta dalkeeda.